Kadib Dacawada Kufsiga ee loo haysto Ronaldo Save the Children iyo EA Sport ayaa kansalaya heshiisyada ay kula jireen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kadib Dacawada Kufsiga ee loo haysto Ronaldo Save the Children iyo EA Sport ayaa kansalaya heshiisyada ay kula jireen
(05-10-2018) Tan iyo Markii ay soo baxday dacwada Kufsiga ah ee loo haysto Cayaaryaahnka dalka Portugal ee Cristiano Ronaldo waxaa hoos usii dhacayey Sumacadiisa waxaana jira in shirkado iyo hay ado badan doonayaan in ay ka baxaan heshiisyadii uu kula jirey.
Shirkada EA Sport iyo Hay ada Caruurta aduunka ee Save the Children ayaa doonaya in ay ka fiirsadaan heshiiskii ay lagaleen Cristiano Ronaldo waxaana macquul ah sida lasheegay in ay gebi ahaan kansalaan maadaama Ninkaan uu galay danbi aad u weyn waa sida lagu eefeysnayo.
Cristiano Ronaldo ayaa Waxaa dacwad ku soo oogtey gabar lagu Magacaabo Kathryn Mayorga taas oo sheegtay in uu kufsaday Sanadkii 2009 Cayaaryahanka iyo qoyskiisa ayaa si weyn u beeniyey arintaas waxaana ay ku tilmaameen Warar been abuur ah oo soo baxay oo kaliya.
Kathryn Mayorga qareenkeeda ayaa cadeeyey in uu jiro falka kufsiga ah ee lagula kacay Gabadhaan laakiin ay ahayd qpf iska jilicsan isla Markaana aan garanayn qaabka danbi loogu soo oogo Ruuxa danbiga ka galay kaas oo lacago yar yar oo laaluush ah siin jirey markasta oo ay dacwad furan lahayd laakiin taasi ay dhamaatay.
Kooxda Kubada Cagta Juventus ayaa sidoo kale markii koobaad hadal ka soo saartay Xaalada Cayaaryaahnkeeda Cristiano Ronaldo waxaana ay leeyihiin marna ma niyad jabi doono Ronaldo wax saameyn ah kuma yeelan doonto dacwada lasheegay in lagu soo oogi doono iyaga oo arintaan dhabarka u saariyey dad ay sheegeen in ay doonayaan in ay fadeexeeyaan Xiddiga dalka Portugal waxaana lagana shaki qabaa in Real Madrid kulug leedahay dacawadaan.